FAHAMAIZANA : Nirehitra ny tambohon’ ny lisea Andohalo, fiara iray kila forehitra
Omaly alarobia maraina no nisy fahamaizana tampoka, tsy fanta-piaviana nanaitra ny teo amin’ny manodidina teny amin’ny lisea Gallieni Andohalo, eto an-drenivohitra. 7 novembre 2019
Raha ny zava-nitranga hita teny an-toerana dia teo amin’ny ampahan’ny tambohon’ny lisea Gallieni Andohalo no nahitana firehetana voalohany, nahazo laka izany ka dia niampita tamin’ireo fiara nijanona teny ivelany. Vokany, fiara iray no may kila forehitra tamin’izany.
Soa ihany fa nalaky tonga ny mpamonjy voina tamin’io fotoana io ary tsy ela akory dia voafehy ny afo. Tsy fantatra mazava ny antony nahatonga ny firehetana hatreto, ao anatin’ny fanadihadiana momba ny zava-nitranga ny tompon’andraikitra amin’izao fotoana izao. Marihina ihany koa fa tsy nisy ny aina nafoy na ny olona naratra. Manentana ny rehetra kosa anefa ny eo anivon’ny sampana mpamonjy voina mba samy ho mailo satria dia ao anatin’ny vanim-potoana mafana ny toetrandro amin’izao, ka mora mahazo laka ny firehetana mamoa-doza tsy ampoizina.